Thursday December 07, 2017 - 09:14:38 in Wararka by Wariye Tiriko
Toddobo iyo toban milyan oo carruur ah oo da'doodu ka hoosayso hal sano ayaa qaata hawo wasakhaysan taas oo halis galisa koriinkii maskaxdooda, sida ay ka digtay hay'adda carruurta u qaabilsan Qaramada Midoobay.
Carruurta Koonfurta Aasiya ayaa ah kuwa ugu daran ee ay arrintani saamaysay, 12 milyan oo carruur ah ayaana ku nool goobo wasakhawga hawada ee ka jiraa uu lix jibaar ka sareeyo sidii loo baahnaa.
Afar milyan oo kalana waxay halis ku wajahaysaa bariga Aasiya iyo Pacific.
Hay'dda badbaadada dhallaanka ee Unicef waxay sheegtay in ay u badan tahay in hawada wasakhaysan ay dhaawacdo maskaxda ayna wax u dhinto korniinkii ay samayn lahayd.
Warbixintan waxaa lagu sheegay in arrintan sidoo kale lala xiriiriyay dhibco hoose oo ay ka keeneen caruurtu "qiimayn lagu sameeyay garaadkooda kaas oo hadal iyo mid aan hadal ahayn isugu jiray, xasuustooda, iyo waliba in ay ka dhibco hooseeyaan carruurta qayrkood ah iyo waliba khalkhal ku yimaaddo neerfahooda.
"Iyadoo ay dunidu sii magaaloobayso aysanna jirin hab ku filan oo lagu xakamaynayo wasakhawga hawada carruur badan oo kale ayay halis soo wajihi doontaa sannadaha soo socda" sida ay sheegtay Unicef.
QM: Hal milyan oo carruur ah ayaa ka qaxday Suudaanta Koonfureed
Guatemala oo hor istaagtay qorshe dumar badan carruur lagaga soo xaaqi lahaa
Carruur ku sugan xerada Calais oo aanan haysan meel ay seexdaan
Waxay ku baaqday in wajiyada la daboosho waxyaabo hawada sifeeyana la adeegsado, carruurtana aan la safranin wakhtiyada ay hawadu aad u wasakhaysan tahay.
Bishii hore uuro halis ah ayaa isku gadaantan hawada magaalada Delhi ee caasimadda u ah Hindiya.
Qaar ka mid ah iskuullada ayaa la xiray. Laakiin markii dib loo furay waalidku waxay maamulka ku eedeeyeen in uusan ahmiyad siinaynin caafimaadka carruurta.